Nagu saabsan - Shijiazhuang Mets Makiinado Co., Ltd.
Shijiazhuang Mets Makiinado Co., Ltd.(hadda kadib loo yaqaan Mets Makiinado) waa shirkad caalami ah oo ku takhasustay soosaarka iyo adeegga bambooyin qulqulaya. Xafiiska ugu weyn wuxuu ku yaalaa aaga horumarka tikniyoolajiyadda sare, Magaalada Shijiazhuang, Hebei Prov.,. Mets Makiinado ayaa maareeya Hebei Hanchang Minerals Co., Ltd. iyo dhowr shirkadood oo caalami ah.
Mets Mashiinnada waxaa la aasaasay 2008, shirkaddu had iyo jeer waxay tixgelisaa tayada wax soo saarka, cilmi baarista iyo horumarka iyada oo ah halbawgeeda nololeed. 30% waa horumariye farsamo oo ka mid ah ku dhowaad 100 shaqaale Shiinaha iyo ajnabi ah oo ka tirsan shirkadda. Mets Makiinado waxay maalgashadeen in kabadan 120 milyan oo yuan dhanka tikniyoolajiyadda, kormeerka tayada iyo hagaajinta habka wax soosaarka 10-kii sano ee lasoo dhaafay, taas oo hubineysa tayada heer caalami ee alaabtayada.
Himiladayada adeegga waa inaan noqono khabiir ku takhasusay qaybaha macaamiisha. Waxaan had iyo jeer u hoggaansamaan mabda'a u janjeedha macaamiisha. Waxaan ka dhiseyn jirnay bakhaarro iyo xarumo loogu adeego meelaha ugu waaweyn adduunka ee macdanta laga qodo, iyadoo la geynaayo iibka shixnadaha heer qoto dheer.
Intaa waxaa sii dheer Mets mashiinada waxay si firfircoon u dhisaan bakhaarada qeybaha dayactirka ee ugu dhameystiran iyo kooxda ugu badan ee adeegga iibinta kadib. Hadda bakhaarkii iyo aqoon-isweydaarsigii ku yaallay Perth, Australia iyo Laos ee Koonfur-bari Aasiya ayaa hawlgalay. Xarumaha adeegga iibka kadib ee Bariga Dhexe, barwaaqa sooranka dawlado madaxbannaan, Koonfurta Ameerika iyo bartamaha Afrika ayaa la qorsheynayaa loona dhisayaa talaabo talaabo.
Waxaan ku adkeyneynaa inaan siino macaamiil tayo sare leh oo tayo sare leh macaamiisha waqtiga ugu gaaban.
Ujeedada 'Metslurry' waa "IN AAD NOQOTO QEYBTAADA GAADHKA AH EE WAREHOUSE IYO SHAQO-SOO SHAQEYN"
Mets loogu talagalay inay bixiso qalab tayo sare leh oo macdanta ah iyo adeegga OEM ee goobaha macdanta. Waxaan ku adkeysaneynaa inaan siino isticmaaleha ugu dambeeya alaab tayo leh oo la isku halleyn karo waqtiga ugu yar ee hogaanka.
Shirkadeena u hogaansan fikradda maamulka "dadka u janjeedha", waxaan si joogto ah u abaabulnaa noocyo kala duwan oo ah waxqabadyada madadaalada, hagaajinta jirdhiska shaqaalaha, kobcinta nolosha shaqaalaha, waxay sameysaa dadaal kasta oo loogu ogolaanayo shaqaalaha shirkadda inay helaan dareenka "guriga" .
Shirkadeenu had iyo jeer waxay u hoggaansantaa "falsafadda cusub, waxqabadka, wax ku oolka ah, xirfadeed" leh '' wax soo saar tayo sare leh '', 'qiimo tartan' iyo 'waqtigii la keenayo' 'si loo daboolo baahiyaha xirfadeed ee heerarka badan leh. macaamiisha kala duwan.
Shirkadaha caalamiga ah
Bilowgii aasaaskeeda, istiraatiijiyad horumarineed ee cilmi baaris madaxbannaan iyo horumarin iyo abuurista summad qaran ayaa la sameeyay.
Go'aan qaadashada iyo adkeysigu waxay noo oggolaaneysaa inaan soo uruurino tikniyoolajiyad iyo waayo-aragnimo oo aan aasaas u dhigno horumarka.
Ballaarinta miisaanka wax soo saarku waa sababta oo ah waxaan mar walba u hoggaansamnaa heerar tayo sare leh.
In kor loo qaado qalabka, tikniyoolajiyadda iyo nidaamka maamulka si loola jaanqaado ballaarinta miisaanka.
Ballaadhinta warshada, ku darida qalabka xakamaynta tirada, iyo hagaajinta cabirka iyo tayada.
Ku guuleysiga joogtada ah ee codsiyada cusub, abuurista qiimaha macaamiisha, iyo u dhaqaaqista mustaqbal xirfadeed.